Sawiro:- Dowladda Ingiriiska oo Tababareysa Ciidanka Xoogga Dalka - Awdinle Online
Home News Sawiro:- Dowladda Ingiriiska oo Tababareysa Ciidanka Xoogga Dalka
Sawiro:- Dowladda Ingiriiska oo Tababareysa Ciidanka Xoogga Dalka
November 07, 2019 (Awdinle Online) – waxaan maanta xeradda tababaradda ee Dowladda Boqortooyadda Ingiriiska ee ku taala koonfur galbeed Soomaaliya ee Magaaladda Baydhabo tababar mudo sanad ku dhow socdey loo soo xirey askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed.
Xafladda Qalin jebinta dufcadan 1aad ee ay tababareen Ciidanka Boqortooyadda Ingiriiska ayaa waxaa ay ka dhacay kuliyadda Tababarka ee ingiriisku ay ku lee yihiin Baydhabo, waxaana la tababarey ciidan tiro ahaan gaaraya ilaa iyo 110 askari oo ka tirsan Ciidan Xoogga dalka.
Munaasadda waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Koonfun Galbeen Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo Safiirka Boqortooyadda Ingiriiska Ben Fernand, sidoo kale waxaa goobta fadhiyey saraakiil sar sare oo ka tirsan xeer federaal iyi xeer maamul gobaleed.
Dowladda ingiriiska ayaa ka mid ah dowladaha sida gaarka ah u taageera soomaaliya, waxaan ay si toos ah taageero buuxda siiyaan Hay’addaha kala duwan ee dowladda sida Wasaaradaha iyo Ciidamada Qalabka sida.
Isha wararka awdinle.com
Previous articleOver 100 soldiers the Somali National Army graduated from a UK training Academy in Somalia
Next articleXoghayaha Guud ee Urur Gobaleedka IGAD oo Xilkiisa la Wareegay